Barnaamujka Hal Adayg ee habeenkii xalay ka baxay HCTV laguna waraysanaayay Jamal Ali Hussein hadaan qiimeeyo wuxuu iila muuqday mid xiiso badan oo nuxur weyn lahaa. W/Q Yassin Ismail.
Wednesday September 05, 2018 - 04:11:21 in Wararka by Super Admin
Xaga falanqaynta xaalada dalku ku suganyay dhinaca siyaasada, nabad gelyada, dhaqaalaha, siyaasada dibada iyo guud ahaan arimaha ijtimaaciga ah ee dalka ka jira.
Jamal oo la waydiiyay su’aalo badan wuxuu uga jawaabay si hufan oo xeel dheeri iyo bisayl aqooneed ka muuqato.
Wuxuu marar dhawr ah soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo hadii dhugmo loo yeesho oo la dabaqo talooyinkaa faaiido u keenaysa dalka.
Jamal hadalkiisa Waxaa la muuqatay oo kale samir badnaan iyo iimaan qab uu ku kalsoonyay qadarka, in kastoo cadaalad darada ku dhacday iyo xangaruufooyinka soo gaadhay ee lagu diidsiyay musharaxnimadiisa aynu ognay siday u qadhaadhayd ee ay badheedhka u ahayd hadana tudhaalaha uu wadanka ka qabo ayaa ka weyn.
Hore wuxuu u yidhi Jamaal "haddii kursiga Illaahay ii qorayna waan heli hadaanu ii qorina Ma hela ayo”
Mar uu ka hadlay arinta jabhada Caare wuxuu ka garaabay cadaalad darada uu ka cadhooday Col: Caare waxase uu dhaliilay talaabada uu qaaday Caare oo aan ahayn tii xalka u noqon lahayd cadaalad darada.
Hadalkaasna wax ceebi kuma jirto. Waxa lagama maarmaan ah in arintan fiiro loo yeesho oo dawlada iyo shacabkuba ku dedaalaan in si nabdaadin iyo sulux ah lagu soo afjaro.